Egwuregwu bọọdụ 25 kacha mma mgbapụ | Nye m oge ntụrụndụ
Isaac | 20/12/2021 14:55 | Emelitere ka 20/12/2021 16:06 | General
na egwuregwu bọọlụ Escape Room Ha dabere na ezigbo ụlọ mgbapụ, ya bụ, setịpụ ma ọ bụ ọnọdụ nwere isiokwu dị iche iche na ụlọ ebe a na-akpọchi otu ndị sonyere na ha ga-edozi usoro mgbagwoju anya wee chọta ihe ngosi iji nwee ike ịpụ n'ime ụlọ ahụ tupu ngwụcha egwuregwu ahụ. ihu igwe. Egwuregwu na-eme ka imekọ ihe ọnụ, nleba anya, ọgụgụ isi, mgbagha, nkà, na ikike atụmatụ nke ọ bụla.
Ihe ịga nke ọma nke ụlọ ndị a emewokwa ka ndị ahụ gbasaa egwuregwu bọọlụ nke ụdị a, ọkachasị mgbe ọrịa na-efe efe gasịrị, ebe ọtụtụ n'ime ụlọ ndị a mechiri maka nchekwa, ma ọ bụ nwee oke n'ihe gbasara otu ndị nwere ike ịbanye. Ya mere ị nwere ike igwu egwu site na nkasi obi nke ụlọ gị, na ya na ezinụlọ dum ma ọ bụ ndị enyi ya. Enwere ha maka uto na afọ niile ...
1 Egwuregwu bọọlụ kacha mma Escape Room
1.2 Ụlọ ọrụ mgbapụ
1.3 Ụlọ mgbapụ egwuregwu 2
1.4 Wepụ: Akụrụngwa Sunken
1.5 Ị kpọghee ekwt! Njem ihe ndị dike
1.6 Ụlọ mgbapụ egwuregwu 4
1.7 Ime ụlọ mgbapụ Egwuregwu egwu
1.8 Ụlọ mgbapụ egwuregwu 3
1.9 Ụlọ mgbapụ The Game: The Jungle
1.10 Otu mgbapụ
1.11 La casa de papel - Egwuregwu mgbapụ
1.12 Agbapụ n'ime ụlọ ahụ: Ihe omimi dị n'ime ụlọ Observatory
1.13 Ọpụpụ: Ụlọ Agbahapụ
1.14 Wepụ: Ihe ngosi dị egwu
1.15 Egwuregwu zoro ezo: Ikpe nke mbụ - Mpụ nke Quintana de la Matanza
1.16 Wepụ: Ọnwụ na Orient Express
1.17 Ọpụpụ: The Sinister Mansion
1.18 Ọpụpụ: The Mysterious Museum
1.19 Egwuregwu zoro ezo: Ikpe nke abụọ - Diadem Scarlet
1.20 Ọpụpụ: ili Fero
1.21 Wepụ: Ụlọ nyocha nzuzo
1.22 Ọpụpụ: Ohi na Mississippi
1.23 Ụlọ mgbapụ The Game: Time Njem
1.24 ụlọ 25
1.25 Wepụ: The Forgotten Island
2 Otu esi ahọrọ egwuregwu ime ụlọ mgbapụ kacha mma
N'ime egwuregwu bọọlụ kacha mma Escape Room enwere ụfọdụ utu aha na-adọrọ mmasị pụrụ iche. Egwuregwu na-enweghị atụ na-emikpu gị n'ọnọdụ nwere nkọwa zuru oke yana ebe ị ga-amanye ụbụrụ gị iji gbalịa dozie nsogbu ndị a:
ThinkFun 76311, mgbapụ ...
Egwuregwu a bụ maka ezinụlọ dum, n'ihi na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma dabara nke ọma na afọ niile site na afọ 13. N'ime ya, ị ga-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị egwuregwu ndị ọzọ (ihe ruru 8) iji dozie ilu, mgbagwoju anya na ịchọta ihe ngosi iji gbalịa dozie nzuzo nzuzo nke Dọkịta Gravely.
Zụrụ Dr. Gravely nzuzo
Ụlọ ọrụ mgbapụ
Nsogbu - mgbapụ ọrụ ...
Egwuregwu emere maka ụmụaka sitere na afọ 6. Ọ nwere ọkwa 3 siri ike, yana usoro roulettes, igodo, kaadị, oghere, ngụ oge, ihe nleba anya ule, wdg. Ihe niile iji mekọrịta ma dozie ihe ịma aka nka nke igodo ahụ, onye isi ajụjụ ajụjụ atụmatụ, wheel nke chioma, wdg.
Zụrụ Ụlọ Mgbapụ Ọrụ
Ụlọ mgbapụ egwuregwu 2
Nsogbu - Ụlọ mgbapụ na ...
Egwuregwu bọọlụ Escape Room maka afọ niile sitere na afọ 16. Ọ nwere ike ịbụ maka onye ọkpụkpọ 1 ma ọ bụ maka ndị egwuregwu 2, ebumnobi ya ga-abụ idozi usoro ihe egwuregwu na egwuregwu mgbagwoju anya, hieroglyphs, ilu, sudokus, okwu mkparịta ụka, wdg. Con nwere 2 dị iche iche nke nkeji 60 njem: Prison Island na mgbapu, na mgbakwunye 15 nkeji njem akpọrọ Kidnapped.
Wepụ: Akụrụngwa Sunken
Devir - Wepụ: akụ ...
Egwuregwu bọọlụ Escape Room nke onye ọ bụla nwere ike isonye na ya, site na afọ 10 na ndị egwuregwu 1 ruo 4. Ebumnobi ya bụ imikpu onwe gị na njem dị egwu iji chọta nnukwu akụ nke dara n'ime omimi nke oke osimiri dị na Santa María.
Zụrụ Akụrụngwa Sunken
Ị kpọghee ekwt! Njem ihe ndị dike
Mepee! Ihe omume ndị dike…
Egwuregwu ụdị Escape a na-ewebata egwuregwu kaadị, na-enwe ike igwu egwu site na ndị egwuregwu 1 ruo 6, yana dabara maka onye ọ bụla sitere na 10. Ogologo oge echere iji dozie egwuregwu a bụ ihe dịka awa 2. Njem njem nke imekọ ihe ọnụ na mgbapụ ga-abụ isi, inwe idozi mgbagwoju anya, koodu decipher, wdg.
Zụrụ ihe omume ndị dike
Ụlọ mgbapụ egwuregwu 4
Nsogbu - mgbapụ ụlọ ahụ ...
Egwuregwu bọọlụ Escape Room a nwere ihe egwuregwu anọ dị iche iche enwere ike idozi n'ihe na-erughị otu elekere. Na ilu, hieroglyphs, ilu ilu, sudokus, crosswords, wdg. Na ọkwa dị iche iche nke isi ike yana enwere ike igwu egwu site na mmadụ 4 ruo 1, site na afọ 3. N'ihe gbasara ọnọdụ ndị agụnyere bụ: Nkwụsị ụlọ mkpọrọ, Nje Virus, Ngụkọ Nuklia, na Ụlọ Nsọ Aztec.
Ime ụlọ mgbapụ Egwuregwu egwu
Nsogbu- Ime ụlọ nke abụọ mgbapụ ...
Mbipụta ọzọ nke usoro egwuregwu a maka ihe karịrị 16s yana maka ndị egwuregwu 2. Enwere ike idozi nsogbu ndị dị ka nke dị n'elu n'ihe na-erughị nkeji iri isii. Na nke a, 60 omume egwu egwu nwere ike ịgụnye gụnyere: The Lake House, na The Little Girl. Ị amaja?
Ụlọ mgbapụ egwuregwu 3
Ngwunye ọzọ na-adọrọ mmasị, na-enwe ike igwu egwu site na mmadụ 3 ruo 5 site na afọ 16. Ọ gụnyere ihe niile ịchọrọ maka ihe egwuregwu elekere 4 nke ọ nwere: Dawn of the Zombies, Panic on the Titanic, Alice in Wonderland, na Akụkụ ọzọ. Dị ka ị nwere ike ịkọ site na aha ha, nke isiokwu dị iche iche.
Ụlọ mgbapụ The Game: The Jungle
Ọ bụrụ na ị na-achọkwu ọdịnaya na ụdị egwuregwu a, ebe a bụ 3 ọhụụ ọhụrụ nke na-erughị 1 hour. N'ọtụtụ ihe ịma aka yana nwere ọkwa dị iche iche nke ihe isi ike. N'okwu a, ihe ngosi ndị agụnyere bụ: Anwansi Anwansi, Sting Snake, na Ọnwa Portal. Ọ dịkwa mma maka mmadụ 3-5 na +16 afọ. Mbipụta Ezinụlọ ka ị kporie ndụ ọnụ.
Ama ama - mgbapụ Party, ...
Egwuregwu ụdị Escape Room emebere maka ụmụaka sitere na afọ 10. Enwere ike ịkpọ ya ọtụtụ oge, ọ na-ejukwa ya anya mgbe niile. Na otutu ajụjụ na ilu iji gbalịa nweta igodo wee gbanarị ụlọ ahụ tupu ndị ọzọ. O nwere ihe karịrị ajụjụ 500: 125 ilu, 125 ọmụma izugbe, 100 ilu, 50 nsogbu mgbakọ na mwepụ, 50 mpụta echiche na 50 visual ịma aka.
Zụrụ nnọkọ mgbapụ
La casa de papel - Egwuregwu mgbapụ
Larousse - Ụlọ nke ...
Ọ bụrụ na-amasị gị usoro Spanish nke na-emeri na Netflix, La casa de papel, Escape Room egwuri egwu. N'ime ya ị nwere ike ịbụ otu n'ime ndị a họọrọ ka ha mee ohi nke narị afọ na National Mint na Stamp Factory na Madrid. Ihe odide na usoro niile nke atụmatụ a ga-agbaso iji nweta ihe nkwakọba ihe.
Zụrụ Ụlọ akwụkwọ
Agbapụ n'ime ụlọ ahụ: Ihe omimi dị n'ime ụlọ Observatory
ThinkFun 76368, mgbapụ ...
Egwuregwu ọzọ a na usoro a na-enye ohere ka ndị egwuregwu 8 sonye, ​​ndị agadi karịrị afọ 10. N'ebe a, ndị egwuregwu ga-abanye n'ime ụlọ nke nnukwu ụlọ a dị omimi iji dozie ihe omimi, mwepu nke onye na-enyocha mbara igwe nke rụrụ ọrụ ebe ahụ.
Zụta ihe omimi n'ụlọ nleba anya
Ọpụpụ: Ụlọ Agbahapụ
Devir - Wepụ: Ụlọ...
Ntọala maka egwuregwu a bụ ụlọ a gbahapụrụ agbahapụ, dị ka aha ahụ na-egosi. Ihe omimi niile gbara ya gburugburu. Egwuregwu bọọdụ egwuregwu mgbapụ na-atọ ụtọ nke ihe isi ike dị elu. Maka afọ 12 na karịa, yana enwere ike igwu egwu naanị ya ma ọ bụ ihe ruru ndị egwuregwu 6. A na-eme atụmatụ na ọ ga-ewe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise ruo iri itoolu iji dozie ya.
Zụrụ Ụlọ Agbahapụ
Wepụ: Ihe ngosi dị egwu
Devir - Wepụ: ngosi ...
Site na otu usoro gara aga, ị nwekwara ụlọ mgbapụ ọzọ a dabere na ngosi dị egwu, maka ndị na-ahọrọ ụdị egwu. Enwere ike ịkpọ ya site na afọ 10, yana ndị egwuregwu 1 ruo 5. Ọ dịghị mfe, ọ pụkwara iwe ihe dị ka nkeji iri anọ na ise ruo iri itoolu iji dozie ya.
Zụrụ ihe ngosi dị egwu
Egwuregwu zoro ezo: Ikpe nke mbụ - Mpụ nke Quintana de la Matanza
Ebe egwuregwu ezoro ezo site na...
Enwere ọtụtụ ikpe nke usoro egwuregwu ezoro ezo, otu n'ime ha a sụgharịrị n'asụsụ Spanish bụ ikpe mbụ a. Ọ dị gị ka onye nyocha n'okwu a. Egwuregwu dị iche iche, nke nwere echiche ọhụrụ nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya. N'ime ya ị ga-enyocha akwụkwọ nke ihe akaebe, nyochaa alibis, ma wepụ ihe mkpuchi ahụ. Ha nwere ike igwu egwu site na ndị egwuregwu 1 ruo 6, ndị gaferela afọ 14, ọ ga-ewekwa ihe dị ka elekere 1 na ọkara na awa 2 na ọkara iji dozie ya.
Zụrụ ikpe nke mbụ
Wepụ: Ọnwụ na Orient Express
Devir - Wepụ: Ọnwụ na ...
Emeela akwụkwọ akụkọ na ihe nkiri gburugburu aha ochie a. Ugbu a na-abịakwa egwuregwu bọọdụ Escape Room nke ndị egwuregwu 1 ruo 4 gbara afọ 12 gbagowe nwere ike sonye. Ụdị ahụ bụ ihe omimi, ebe nhazi ahụ bụ ụgbọ oloko akụkọ ifo, nke e gburu igbu ọchụ na ị ga-edozi ikpe ahụ.
Zụrụ Ọnwụ na Orient Express
Ọpụpụ: The Sinister Mansion
Devir- Wepụ 11, The ...
Aha ọzọ ị ga-agbakwunye na usoro ọpụpụ. Emebere ya ihe karịrị afọ 10 na ndị egwuregwu 1-4, yana enwere ike idozi nsogbu ndị ahụ mgbe nkeji 45 ruo 90 gachara. Akụkọ a gbadoro ụkwụ na nnukwu ụlọ ochie dị n’agbata obi. Ebe gbadara agbadata, ihe omimi na ịnọ naanị ya nke gbahapụrụ. Otu ụbọchị ị nwetara akwụkwọ ozi n'igbe ozi gị na-arịọ gị ka ị gaa ebe ahụ, ebe ị ga-ezute ndị enyi gị. Ime ụlọ mara mma na ihe ịchọ mma echekwara nke ọma bụ ihe ijuanya. Ma na mberede, ọnụ ụzọ na-emechi na ihe niile fọdụrụ bụ ịgbalị ịchọpụta ihe ndetu pụtara.
Zụrụ Ụlọ Mmanya ahụ
Ọpụpụ: The Mysterious Museum
Devir - Wepụ 10, Ụlọ ihe ngosi nka ...
Ụlọ mgbapụ a na-akpọga gị n'ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ebe ị na-atụ anya ịhụ ọrụ nka, ihe ọkpụkpụ, ihe oyiyi, ihe ndị ọzọ, wdg, dịka ụlọ ngosi ihe ngosi ọ bụla ọzọ. Ma na ụlọ ngosi ihe ngosi nka ọ dịghị ihe ọ dị, ị ga-agbalịkwa ịgbapụ, ebe ọ bụ na a ga-ejide gị n'ime ụlọ a dị omimi.
Zụrụ ihe ngosi ihe omimi ahụ
Egwuregwu zoro ezo: Ikpe nke abụọ - Diadem Scarlet
Yiri nke mbụ, ma na nke a, ị ga-abanye na nyocha banyere izu ohi nke ihe nketa sitere na ezinụlọ bara ọgaranya nke ndị isi. Ezuru ya n'ụlọ ihe ngosi nka Greater Borstelheim ma onye edemede ahụ hapụrụ ozi dị omimi. Banye na akpụkpọ ụkwụ kọmishọna ma chọta ndị na-akpata ohi a.
Zụrụ ikpe nke abụọ
Ọpụpụ: ili Fero
Devir - Wepụ: ili ...
Egwuregwu a na-enye ohere 1 ruo 6 ndị egwuregwu gbara afọ 12 na karịa. Emebere ya nke ọma maka ndị hụrụ njem na akụkọ ihe mere eme nke Egypt n'anya. Akụkọ a sitere na njem gaa Egypt maka ezumike, ebe ị na-eleta ebe niile dị ịtụnanya, dị ka ili Tutankhamun, ebe ihe omimi gbara ya gburugburu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anwansi. Ka ị na-abanye n'ime labyrinth gbara ọchịchịrị ma na-ajụ oyi, ọnụ ụzọ nkume ahụ na-emechi, ma ọnyà gị. Ị ga-enwe ike ịpụ?
Zụrụ ili Fero
Wepụ: Ụlọ nyocha nzuzo
Devir - Wepụ: The ...
Aha ọzọ a na-ewebata gị na akụkọ nke gị na ndị enyi gị kpebiri isonye na nnwale ụlọ ọgwụ. Ozugbo n'ime ụlọ nyocha, ebe ahụ yiri ka ọ tọgbọrọ chakoo, enwerekwa ikuku nke ihe omimi. Otu gas na-amalite isi na tube ule na-apụta, ị na-amalitekwa ịma jijiji ruo mgbe ị tụfuru uche. Ozugbo ị nwetaghachiri onwe gị, ị ga-ahụ na emechiela ọnụ ụzọ ụlọ nyocha wee jide gị. Ugbu a ị ga-edozi ilu iji pụọ ...
Zụrụ ụlọ nyocha nzuzo
Ọpụpụ: Ohi na Mississippi
Devir- Wepụ egwuregwu 14, ...
Egwuregwu ọkwa ọkwa ọzọ dị elu, maka ọnụ ụlọ mgbapụ kacha ọkachamara. Enwere ike ịkpọ ya naanị ya ma ọ bụ ruo ndị egwuregwu 4, yana ihe karịrị afọ iri na abụọ. Aha mmanya vine, nke edobere n'ime ụgbọ mmiri a ma ama, yana ndị ohi n'etiti. Nnukwu nhọrọ ma ọ bụ nkwado na Orient Express.
Zụrụ ohi na Mississippi
Ụlọ mgbapụ The Game: Time Njem
Egwuregwu bọọlụ Escape Room a bụ maka afọ niile site na afọ 10, ndị egwuregwu 3 ruo 5 nwere ike ịkpọ ya. Aha nke juru ilu, hieroglyphs, sudokus, okwu ntughari, ilu, wdg, enwere ike idozi n'ihe na-erughị otu elekere. Na nke a, ọ na-abịa na 1 ọhụrụ thematic njem lekwasịrị anya na njem oge: gara aga, ugbu a na ọdịnihu.
Zụrụ njem oge
Asmodee- Ime ụlọ 25, ...
Aha maka ndị egwuregwu sitere na afọ 13. Njem dum dabere na akụkọ ifo sayensị, n'ọdịnihu dị nso ebe enwere ihe ngosi eziokwu akpọrọ Room 25 na ebe a na-agafe ahịrị uhie ụfọdụ iji gbalịa nweta ndị na-ege ntị. A ga-akpọchi ndị na-eme ntuli aka n'ime ụlọ 25 nwere mmetụta dị ize ndụ na nke a na-atụghị anya ya nke ga-etinye ha n'ule. Na, iji mee ka mgbapụ ahụ sie ike, mgbe ụfọdụ enwere ndị nche na-etinye aka n'etiti ndị mkpọrọ ...
Zụrụ ụlọ 25
Wepụ: The Forgotten Island
Devir - Wepụ: Àgwàetiti ahụ ...
Nke a bụ nnukwu onyinye ọzọ nke usoro ọpụpụ. Ihe egwuregwu ụdị Escape Room maka ihe karịrị afọ 12 yana enwere ike igwu egwu site na ndị egwuregwu 1 ruo 4. Enwere ike idozi ihe ịma aka ahụ n'ihe dịka nkeji 45 ruo 90. N'ime egwuregwu a, ị nọ n'àgwàetiti nke nwere obere paradaịs, mana mgbe ị ghọtara na ọ gafeela, ị ga-agbanarị n'ụgbọ ochie ejiri eriri agbapụ nke a ga-ahapụ ...
Zụrụ Agwaetiti echefuru echefu
Otu esi ahọrọ egwuregwu ime ụlọ mgbapụ kacha mma
N'oge họrọ egwuregwu bọọdụ Escape Room, ọ dị mkpa ileba anya n'ọtụtụ atụmatụ, dịka ọ dị na egwuregwu ndị ọzọ:
Opekempe afọ na ọkwa isi ike: Ọ dị ezigbo mkpa idobe afọ kacha nta nke egwuregwu tebụl ka ndị egwuregwu niile e bu n'obi nwee ike sonye. Tụkwasị na nke ahụ, ọkwa nke ihe isi ike na-ekpebikwa, ọ bụghị nanị ka ụmụntakịrị nwee ike itinye aka, kamakwa dabere na ikike nke ndị okenye. Ikekwe ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmalite na utu aha dịtụ mfe ma jiri nwayọọ nwayọọ nweta ndị dị mgbagwoju anya.
Ọnụọgụ ndị egwuregwu: N'ezie, ọ dịkwa mkpa ikpebi ma ị ga-egwu naanị gị, dị ka di na nwunye, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ egwuregwu bọọlụ Escape Room ebe ị nwere ike itinye aka na nnukwu ìgwè.
Ihe omumu: nke a ọzọ na-aghọ ihe kpere onwe, ọ bụ ihe ụtọ. Ụfọdụ na-ahọrọ egwu egwu ma ọ bụ isiokwu egwu, ndị ọzọ akụkọ sayensị, ikekwe etinyere na fim ha bụ ndị na-akwado ya, wdg. Buru n'uche na n'agbanyeghị na ha na-agbalị ịmegharị ahụmịhe nke ezigbo Escape Rooms, mgbanwe dị na ụfọdụ egwuregwu bọọlụ ndị a nwere ike ịgbanwe.
Na mgbakwunye na nke a, ọ dịkwa mkpa ịmata ụfọdụ nkọwa nke Ndị na-emepụta ya N'ime egwuregwu ndị a, wee chọpụta ihe nke ọ bụla nwere ọkachamara na ya, iji chọpụta nke kachasị mma maka mkpa ma ọ bụ mmasị gị:
Ị kpọghee ekwt: Egwuregwu bọọlụ a haziri utu aha ya na-eche echiche imepụta ahụmịhe dị ka ezigbo ụlọ mgbapụ, yana ime ụlọ ejiri ezigbo eziokwu megharịa.
Ụzọ ọpụpụ- Nke a ọzọ ika lekwasịrị anya karịa na uche ịma aka, mgbagwoju anya na sudokus nke kwesịrị idozi, ma kewara ha n'ime ọkwa (onye mbido, etiti na elu).
Ime ụlọ egwuregwu ahụ: usoro isiokwu a bụ nke na-enye ikuku dị mma na imikpu, na egwuregwu ndị na-akọwapụta nke ọma na akụkụ anya, ihe onwunwe, na ọbụna ngwa mkpanaka nke iji tinye ụda ma ọ bụ egwu ndabere.
Egwuregwu zoro ezo: Ezubere ya maka ndị nwere mmasị karịa ụdị uwe ojii na mpụ. Ha na-abata na envelopu kaadiboodu dị ka a ga-asị na ha bụ ezigbo igbu ọchụ, wdg, na ebe ị nwetara ihe niile ịchọrọ iji nyochaa ma chọpụta ihe merenụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nye m oge ntụrụndụ » General » Egwuregwu bọọlụ kacha mma Escape Room